‘Nilaza tantara mivelatra kokoa amin’ny firenenay ny nanagadrana anay’: Eritreritra avy amin’ireo bilaogeran’ny Zone9 ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2015 7:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Français, Swahili, English
Taorian'ny fanafahana madiodio sy ny famoahana azy ireo hivoaka ny fonja, mieritreritra ny zava-niainany ny blaogeran'ny Zone9 ao Ethiopia ary mankasitraka ny mpanohana azy ireo. Nosamborina tamin'ny avrily 2014 ireo blaogera ireo ary notsaraina eo ambanin'ny lalànan'i Ethiopia miady amin'ny fampihorohoroana. Navotsotra tamin'ny jolay 2015 ny dimy amin'ireo mpikambana ary noafahana madiodio sy navotsotra tamin'ny herinandron'ny 19 oktobra 2015 ny efatra ambiny. Fantaro bebe kokoa ny raharaha momba azy ireo.
Ity lahatsoratra ity dia niarahan'ny Zone9 nosoratana ary nadikan'i Endalk Chala avy amin'ny teny Amharika ho amin'ny teny anglisy.